I-Rustic Lake Cottage E-Quiet Cove eLake Lanier! - I-Airbnb
I-Rustic Lake Cottage E-Quiet Cove eLake Lanier!
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jenny
Indawo yami iyindlwana ethokomele, ewubukhazikhazi, enezitezi ezimbili eyakhelwe phansi kwezintaba ezisenyakatho ye-Georgia eLake Sidney Lanier. Izinyathelo ezisuka echibini endaweni ethule, enokuthula enedokhi enesitezi esiphindwe kabili kanye nokushelela kwesikebhe!
"Umsingathi ubesabela kakhulu, futhi indlu ibithandeka kakhulu inegumbi elimangalisayo lelanga khona echibini, bekune-hammock, ama-kayak ama-2 ebesiwasebenzisa, idokodo lesikebhe elinendawo ephezulu enamatafula nezihlalo ebesihlala kuzo. yayinothando kakhulu futhi ikufanele"
Indawo yami iyindlwana ethokomele, ewubukhazikhazi, enezitezi ezimbili eyakhelwe phansi kwezintaba ezisenyakatho ye-Georgia eLake Sidney Lanier. Itholakala endaweni ethule nje izinyathelo kude nedokhu lakho eliyimfihlo elinesitezi esiphindwe kabili. Ilungele ukuhamba ngesikebhe, ukubhukuda, i-kayaking nokudoba.
Kukhona imibhede engu-4, inkosi, i-trundle engamawele kanye nombhede ogcwele olala izivakashi ezi-4-6 sezizonke.
Ikotishi lipholile ngamayunithi amafasitela futhi lishiswa ngegesi ezingeni eliyinhloko kanye nogesi phezulu. I-sunroom enkulu ipholile nge-window AC unit kanye nabalandeli ababili be-celling. Izitebhisi eziya esitezini sesibili zingase zilethe inselele kwesinye isivakashi esikhulile nesincane. Bekuwuhambo olufushane oluya epaki yamanzi yaseLake Lanier Islands (nakhona kufinyelelwa kuyo ngesikebhe) kanye nemizuzu ukusuka ezitolo, ezitolo zegrosa nezindawo zokudlela . Imizuzu engamashumi amathathu noma ngaphansi ukuya edolobheni elidumile laseDahlonega, izivini ezinhle kakhulu, izimpophoma, izindlela zokuqwala izintaba, kanye namashubhu e-Chattahoochee. Leli yikhaya elilungele imindeni, elinendawo eningi yezingane zokudlala, nendawo ethule yokubhukuda. Futhi kuhle kumabhangqwana abalekela!
1 umbhede omkhulu, umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2
4.53 · 134 okushiwo abanye
Indawo esihlala kuyo ithule kakhulu, inehlathi futhi iyinhle. Umgwaqo ophambi kwekhaya unobhuqu futhi unikeza indawo eyanele yokupaka izimoto ezimbili kodwa kunendawo yokupaka egandayiwe okwabelwana ngayo kude nje nezinyathelo ezimbalwa. Qaphela lapho ushayela njengoba izinyamazane zigcwele endaweni, ngisho nasemini!
Umsingathi wethu uhlala eduze futhi uzotholakala ukuze aphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, noma usizo uma kuphakama inkinga!